Yuyao changjiang Ubushushu Meter Factory (Yuyao Gongyi Meter co., Ltd.) Liqela ishishini leyo ilawulwa iteknoloji eliphezulu kwaye ihlanganise uyilo zobugcisa, imveliso, ukuthengiswa kunye nokuthengisa. Le nkampani iye yasekwa ngowe-1995, kuye lobushushu iimveliso isilawuli-ekhokelwa, sele efunde kwiminyaka engaphezu kwama-20 kwimveliso kunye namava isicelo; zenkampani umenzi phambili abenzi lobushushu isilawuli sasekhaya, imveliso yonyaka kunye kwiintengiso abalawuli lobushushu 500,000, inkampani iye izixhobo yemveliso yanamhla, kuquka imigca imveliso Umatshini oluzenzekelayo ikhompyutha chip, umatshini-mbini wave ngelotha okhokelayo-free kunye nezinye izixhobo yemveliso mome .
Ukuqinisekisa inkampani umgangatho imveliso unalo igumbi ukwaluphala-lobushushu eliphezulu elikhulu, iindidi nabaqondisi lobushushu zinakho abaneminyaka engaphezulu kwama-10,000 ukuqinisekisa ukuba zonke iimveliso mveliso wanika abalupheleyo iiyure ezingaphezu kwama-72.
Ukuze kuqinisekiswe ukuthembeka imveliso ukuyila Le nkampani kwakhona une EMI, EMC izixhobo ehambelanayo uvavanyo magnetic kunye namaqondo obushushu kunye nokusingqongileyo ukufuma elebhu kunye nezinye izixhobo zovavanyo mihla, eyenza kube lula ukuqinisekisa ukuveliswa ekumgangatho ophezulu, Ukuchaneka phezulu, ukuthembeka phezulu, inkonzo ende iimveliso ubomi asezantsi obushushu aphile; Le nkampani lula ngokupheleleyo Ngaphezu IS9001-2008 ziqhube ngqo phantsi kwale nkqubo, zonke iimveliso Yao Yi wadlula isiqinisekiso CE, yaye ezinye iimveliso eziphambili zigqithile i ul nokuqinisekiswa eUnited States, kunye mvume ukuvelisa izixhobo zokulinganisa (CMC Zhejiang wenza 02810232), ebezisebenza ngokupheleleyo ukususela ngonyaka inkqubo iwelding 2006 Lead, kwangaphambili ukuba bafezekise imigangatho yaseYurophu ROHS kwaye igalelo kukhuselo indalo yethu.
4-20ma Pt100 Temperature Transmitter, ubushushu Controller, pid Ubushushu Controller , Digital Temperature Controller, pid Ubushushu Controller Ngokuba sesitovu , Zonke iiMveliso